Kawasaki Super Sherpa 2006 Farm Trader New Zealand | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
18 Jun 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် Kawasaki Super Sherpa 2006 Farm Trader New Zealand
There has been the odd modification, သော်လည်း. The original models had the front mudguard mounted really close to the wheel, this was fine for riding on the street, but didn’t offeralot of protection from rocks and dirt and was prone to clogging up if riding through mud.
Versys 1000 2014 ဆန်းစစ်ခြင်း – Versys မှတစ်ဦးကနယူး Big Brother 650!
အသုံးပြုခံ့ 2005 Kawasaki Vulcan 800 – reviews, Prices and Specs at Motorcyclist…
Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် ဟွန်ဒါ DN-01 Ducati Desmosedici GP11 Moto Guzzi 1000 Daytona Injection တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး Aprilia Mana 850 Ducati Diavel KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို Bajaj Discover အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix Brammo Enertia မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto ဆူဇူကီး Colleda CO ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype စမတ် eScooter စက်ဘီး Kawasaki ER-6n ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဆူဇူကီး AN 650 ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို Ducati 60